Bokin' ny Fitomaniana - Wikipedia
Bokin' ny Fitomaniana
(tonga teto avy amin'ny Bokin'ny Fitomaniana)
Ny Bokin' ny Fitomaniana dia boky hita ao amin’ ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly kristiana. Tonon-kiram-pisaonana lava narafitra amin’ ny fomba kanto no ao anatiny, izay mamisavisa ny fahoriana lehibe vokatry ny fahirano, ny fandravana an’ i Jerosalema sy ny Tempoly. Mafonja ny tonon’ ireo Fitomaniana ireo izay maneho ny fahoriana lalina vokatry ny fahantrana sy ny mosary sy ny fandripahana ary ny loza hafa koa. Ireo rehetra ireo dia fisehon’ ny famaizan’ Andriamanitra noho ny fahotan’ ny vahoaka sy ny mpaminany ary ny mpisorona. Na dia izany aza dia mifarana amin’ny tonon-kiram-panantenana ny Bokin' ny Fitomaniana.
Navondrona ireo tonon-kira ireo, angamba mba hatao ho fahatsiarovana sady harahina fifadian-kanina. Ny fiangonana kristiana sasany dia nampiditra ny Fitomaniana ao amin’ ny litorjian’ ny Herinandro masina.
3.1.1 I Jerosalema: andriambavy nilaozan' olona (1)
3.2 Endrika kanton' ireo Fitomaniana
Indraindray atao hoe Fitomanian’ i Jeremia ny Bokin' ny Fitomaniana. Miantso azy hoe איכה / ’Êkhâ na ‘Êykhôh ("Ahoana!") ny Jiosy, teny voalohan’ireo lahatsoratra hebreo atao hoe קינות / Kinoth ("hira fisaonana"). Θρῆνοι / Thrênoi ("Hiram-pitarainana") no anaran’ny boky ao amin’ny Septoaginta (na Septanta) fa Lamentationes kosa ("Fitomaniana") ao amin’ ny Volgata.
Araka ny lovantsofina dia nosoratan' i Jeremia ny Bokin' ny Fitomaniana, nefa ny mpikaroka ankehitriny dia tsy mahita izay hanaporofoana izany ka mihevitra fa olona roa tsy fantatra anarana no nanoratra ireo Fitomaniana ireo. Ny Fitomaniana voalohany hatramin’ny faha-4 dia hoatry ny nataon’olona iray ihany.
Nosoratana tamin’ny fotoana nanaovana dikan-teny grika voalohany ny Baiboly hebreo ny andian-tsoratra hoe Fitomanian’ i Jeremia, izany hoe tamin’ny taona 250 tal. J.K., izay nanampy teny mialoha nanondro an’i Jeremia ho nanoratra ireo Fitomaniana ireo. Izany dia vokatry ny fahadisoan-kevitra tamin’ny fahazoana ny hevitry ny andala-teny ao amin’ny Boky faharoan' ny Tantara (2Tant. 35.25) izay manao hoe :
Ny mpikaroka momba ny Baiboly dia samy miaiky fa vita soratra amin’ ny endriny ananana azy ankehitriny ny Bokin' ny Fitomaniana tamin’ny fotoan’ny Fahababoana tany Babilôna (586-538 tal. J.K.). Nosoratana tamin’ny fotoana nanjakan’ ny horohoro sy ny fanahiana ny Fitomaniana, na izany aza dia efa vita taloha ela ny fitomaniana sasany.
Mizara dimy ny Bokin' ny Fitomaniana ka ny fizaràna tsirairay dia Fitomaniana iray.
Maneho ny fahorian’i Ziôna taoriana’ny faharavan’i Jodà sy ny fandravan’ny Babilôniana ny Tempoly ireo Fitomaniana ireo, izay maneho ny famaizana ataon’Andriamanitra amin’ny vahoakany be fahotana. Angamba nosoratana izy ireo mba ho vakina ampahibemaso eo amin’ny fiangonana amin’ny andro fisaonana izay atao isan-taona ho fahatsiarovana izany fahavoazam-be izany. Na dia izany aza, ny Fitomaniana rehetra dia mampahatsiahy ny famindram-pon' Andriamanitra sy manambara ny fanatenana ny amin' ny hampanginan' Andriamanitra ny fahatezerany sy ny hampijoroany indray ny vahoakan' i Israely.
I Jerosalema: andriambavy nilaozan' olona (1)Hanova
Tezitra Andriamanitra (2)Hanova
Mampionona ny olony Andriamanitra (3)Hanova
Fanantenana famonjena avy amin’Andriamanitra (4)Hanova
Mitarainana amin'Andriamanitra ny olony (5)Hanova
Endrika kanton' ireo FitomanianaHanova
Fanangonana amboaran-tononkira dimy izay mitovy ngadona amin’ny atao hoe kinah (“hiram-pisaonana”) ny Bokin'ny Fitomaniana. Ny toko iray dia atao hoe “fitomaniana” (sahala amin’ny “salamo” ao amin’ny Bokin' ny Salamo). Ny Fitomaniana efatra voalohany dia samy manana andininy izay manomboka amin’ny litera ao amin' ny abidy hebreo. Ny famakiana ny fitambaran’ny litera voalohany amin’ny andininy rehetra dia tsy misy heviny.
Fitomaniana voalohany sy faha-2 ary faha-4Hanova
Ny Fitomaniana fahatelo dia miavaka satria ahitana andininy 66, ka andininy telo isaky ny litera tsirairay ao amin'ny abidy hebreo. Ilay olon-tokana mitomany dia ny Fanjakan' i Jodà izay nampitenenina tahaka ny olona. Ny Fitomaniana faha-3, izay arak’abidia, nefa nalahatra ho vondron’andininy telo, (ka ny tsirairay amin’ireo dia manomboka amin’ny litera mitovy), dia manana toetra miavaka sady mampahatsiahy ilay atao hoe "Fieken-pinoan'i Jeremia".
Ny Fitomaniana faha-5 dia tsy arak’abidia, na dia ahitana andininy mitovy isa amin' ny litera herbreo (miisa 22).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Fitomaniana&oldid=1041920"